Vamwe Vagari kwaMurehwa Vanoti Kwete kuSarudzo Nguva Ino
Gumiguru 22, 2010
Vamwe vagari wekwaMurewa vanoti dai hurumende yambomira kushevedzera sarudzo kuitira kuti dzisaitwe nguva ino sezvo vanhu vachiri mubishi rekuvakiridza murunyararo hupenyu hwavo hwakavhirongwa nemhirizhonga yemuna 2008. Mashoko aya anotevera mashoko evatungamiri vezvematongerwo enyika, avo vari kuti sarudzo dzichaitwa gore rinouya.
Kunyange hazvo mutungamiri weZanu PF, VaRobert Mugabe, pamwe nemutungamiri weMDC, VaMorgan Tsvangirai, vari kukurudzira vatsigiri vavo kuti vagadzirire sarudzo gore rinouya, mumwe mugari wekwaMurewa, Amai Maimbidze Masiyambiri, vanoti havabvumirani zvachose nepfungwa yokuti Zimbabwe ipinde musarudzo gore rinouya.
Izvi zvatsinhirwawo naMuzvare Sheila Matambo, avo vanoti dai hurumende yapa vanhu mukana wokuti vagadzirise magariro avo murunyararo ichivabatsira nepainogona napo nezvinhu zvakaita sezvekudya, nzvimbo dzakanaka dzokugara nemishonga pane kushevedzera sarudzo.
Amai Masiyambiri vanoti pfungwa yesarudzo inotoshaisa mufaro vanhu vakawanda zvichitevera pfumvu yavakaona musarudzo dzakaitwa muna 2008.
Mumwe mugari wemunzvimbo iyi, Amai Chenai Chizuva, vanoti hurumende yemubatanidzwa inofanirwa kushandira veruzhinji pari zvino, yombomisa kupinda muhurongwa hunosiya vanhu vava munjodzi, kana kuparadzirwa misha yavo, sezvo munyika musati magadzikana.
Kunyange hazvo vanhu vakawanda vakaramba kutaura nesu panyaya yesarudzo, zviri pachena kuti vanhu vachiri nekakutya, kunyange hazvo vachigona kutaura nezvenyaya yenzara vakasununguka.
Zimbabwe ine chirongwa chekunyorwa kwebumbiro idzva, iro rinofanirwa kuvapo munyika musati maitwa sarudzo. Asi mhirizhonga iri kudzosera shure kupera kwechirongwa ichi, izvo zvichaita kuti patore nguva refu pasati paitwa referendamu.
Asi makakatanwa aripo pakati paVaTsvangirai naVaMugabe, ava kupa kuti vaviri ava vafunge kuti sarudzo chete ndidzo dzinopedza gakava iri.
Asi MDC inotungamirwa naVaArthur Mutambara inoti Zimbabwe haisati yagadzirira kupinda musarudzo, nokudaro hurumende yemubatanidzwa inofanirwa kushanda kwemakore mashanu.
Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezve matongerwo enyika dzinoti MDC-M iri kutya kupinda musarudzo nekuti haina vatsigiri vakawanda vanoivhotera kuti inge iri muhurumende ichaumbwa mushure mesarudzo dzegore rinouya.